Ny tsiro sy ny loko rehetra, ity no gastronomie Peroviana matsiro | Vaovao momba ny dia
Ny tsiro sy ny loko rehetra, ity no gastronomie Peroviana matsiro
Maria | | gastronomy, Peru
Ny gastronomy Peroviana dia heverina ho iray amin'ireo be mpampiasa indrindra eto an-tany satria vokatry ny fampifangaroana ireo akora sy kolontsaina samihafa toy ny Espaniola, Italiana, Afrikana, Japoney na Sinoa, izay mazava ho azy fa tsy maintsy ampidirintsika ny Inca. Ny karazan-tsakafony dia teraka niaraka tamin'ny fiheverana diso ary nitombo rehefa tonga tany amin'ny seranan'i Callao ireo mpifindra monina avy any Eropa, Azia ary Afrika.
Fa inona no ao ambadiky ny fisondrotana amin'ny gastronomie Peroviana? Mba hahatakarana azy dia tsy maintsy mankafy ny kolontsaina, ny tantara, ny fomban-drazana ary ny tsiro mifandraika amin'ny sakafo ao an-toerana ianao. Avy amin'ny ceviches tsotra indrindra hatramin'ny tolo-kevitra be pitsiny indrindra avy amin'ny trano fisakafoanana malaza.
Talohan'ny nahitana sisintany, Peroa no toeram-ponenan'ny sakafo maro izay anisan'ny sakafon'ireo firenena tsy tambo isaina.
Any Peroa dia misy karazana ovy sy ovy marobe, maro toy ny voatabia sy katsaka, ary koa karazana voankazo enin-jato tompon'ity tany ity. Ny pantry toy izany dia nahatonga ny tolo-kevitra momba ny gastronomika tsy manam-paharoa, miovaova ary tena mahaliana.
Ao anatin'ny nahandro Peroviana dia azontsika atao ny manavaka azy: ny nahandro Andean (izay mbola mitazona ireo lovia vita tamin'ny akora talohan'ny Inca), ny nahandro amoron-tsiraka (daty tamin'ny vanim-panjakan'ny mpanjaka) ary ny nahandro an'ny Amazon (malalaka tsy fantatra ).
1 Sakafo Andean
2 Sakafo amoron-dranomasina
3 Sakafo an'ny Amazon
Ny sivilizasiona Inca dia nanjaka tany Amerika atsimo araka ny fijoroana ho vavonin'ireo nandresy toa an'i Francisco Pizarro sy mpanao tantara tamin'izany fotoana izany. Tontosa ny fahefany ary ny trano fonenan'ireo Incas dia any Cuzco, izany no antony itanan'i Peru anjara asa lehibe amin'ity karazan-tsolika ity amin'ny firenena toa an'i Kolombia, Ekoatera na Bolivia.
Ny havoana peroviana dia mitovy hevitra amin'ny karazany ary ny nahandro Andean dia be dia be amin'ny lolosy, lasopy, hena ary tsindrin-tsakafo tena tsara mifototra amin'ny katsaka, ronono ary voankazo. Manana ny lanjany ara-tsakafo avo lenta ny vokatr'izy ireo ary fantatry ny mponina fahiny ao Però ny fomba fampifangaroana azy ireo mba hamoronana tsiro manankarena nefa tsy hahafoana ny fananana voajanahary. Mba hahatratrarana izany, ny fatana vita amin'ny ala sy ny vilany tanimanga dia ao anatin'ny fahendren'ny Inca hitahiry ireo otrikaina amin'ny sakafo.
Ny hena, voam-bary, fantsom-panafody sy zavamaniry no fototry ny fomban-drazana gastronomic ary miaraka amin'ireo akora ireo dia anaovana lovia matanjaka toy ny pachamanca, pataca, varavarana masiaka, chochoca ary chairo ankoatry ny maro hafa.
Ny tsindrin-tsakafo dia miavaka amin'ny fampiasana katsaka, ronono ary voankazo sasany avy any amin'ny havoana. Misongadina ny chapana, ny quesillo misy tantely, ny cocadas, ny manjarblanco ary ny jela (zava-mamy blackberry sy elderberry). Mikasika ny zava-pisotro misy alikaola kosa, ny fanahy mpanakanto, divay ary cider no be mpividy indrindra miaraka amin'ny chicha katsaka.
Mikasika ny nahandro amoron-tsiraka Peroviana, dia misy lovia sy karazan-karazany isan-karazany, anisan'izany ny sakafo an-dranomasina sy ny sakafo kreôla.
Ny toetra mampiavaka ny nahandro amoron-tsiraka dia ny fifangaroan'ny akora, ny karazany ary ny fampisehoana lovia maro loko. Ny faritra amoron-tsiraka tsirairay dia mampifanaraka ny nahandro azy amin'ny vokatra natolotry ny rano masira sy mamy (anisany ny renirano Amazon sy ny farihy Tititaca).
Ny toetrandro mafana any amin'ny morontsiraka avaratra Peroviana dia manome ny tsirony fitakian'ireo mpitsidika anay karazana hazan-dranomasina sy trondro izay mahafaly ny lanilaninao. Fomba matsiro hanandrana ireo tsiro isan-karazany an'ny ceviche, lovia miorina amin'ny trondro vita amin'ny trondro voahosotra miaraka amin'ny ranom-boasarimakirana sy saosy coriander no sakafo malaza indrindra eto amin'ny firenena.
Ny lovia hafa dia misy chupe shrimp, lovia mahazatra avy amin'ny departemantan'i Arequipa vita amin'ny trondro, patsabe, ovy, ronono ary sakay. Any Peroa dia misy karazany maro ny lolosy toy ny lollipop tsaramaso, ny lollipop Zapallo na ny olluquito lolipop.
Raha ny momba ny tsindrin-tsakafo, ny nahandro amoron-tsiraka dia manana karazana tsindrin-tsakafo nentin-drazana maherin'ny 250, avy amin'ny tanàna amoron-tsiraka hatramin'ny fotoanan'ny Viceroyalty of Peru, toy ny sento Lima, ny picarones, ny nougat na ny mazamorra volomparasy, ankoatry ny hafa.
Sakafo an'ny Amazon
Barbecue Picuro via Made in Tingo María
Ny nahandro an'ny Amazon of Peru dia miarahaba antsika miaraka amin'ireo lovia hafahafa. Ny fotony dia vokatra azo avy amin'ny natiora toy ny fon'ny palmie, akondro, vary, trondro na akoho amam-borona. Na izany aza, mihinana hena hafa toy ny zanak'ondry na henan-kisoa.
Ny sasany amin'ireo lovia malaza indrindra amin'ny nahandro Amazonianina Peroviana dia ny tacacho, juanes, asado de picuro, apichado na patarashca. Mikasika ny ron-kena kosa dia niavaka ny inchicapi (akoho nandrahoina voanjo, voanio ary yucca) ary ny ron-kena karachama (namboarina trondro ary nohanina niaraka tamin'ny akondro sy voanio).
Mikasika ireo zava-pisotro kosa dia misongadina ny ranom-boankazo vaovao toy ny aguajina sy ny cocona, ary koa ny zava-pisotro hafa toa ny masato, chuchuhuasi, uvachado ary chapo, voaomana amin'ny akondro na ronono.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Ny tsiro sy ny loko rehetra, ity no gastronomie Peroviana matsiro
Toerana itadiavana fitsaharana sy "fiainana tsara" (II)
Toerana itadiavana fitsaharana sy "fiainana tsara" (I)